स्मार्टफोनले क्यान्सर त फैलाउँदै छैन ? यसरी चेक गर्नुस् - dsnews
स्मार्टफोनले क्यान्सर त फैलाउँदै छैन ? यसरी चेक गर्नुस्
के कुनै स्मार्टफोन क्यान्सरको कारक बन्न सक्छ ? सामान्यरुपमा भन्दा यो सम्भव छैन । अहिलेसम्म गरिएका अधिकांश सर्भेक्षणहरुले देखाएका छन् कि फोनहरुले रेडियो वेभको कारण विकिरण उत्सर्जन गर्छन्, तर यस्तो विकिरणले डिएनएलाई नै बिगार्ने क्षमता राख्दैन ।
जति कम भयो त्यति राम्रो हो । तर, माथि उल्लेख गरिए झैं अमेरिकाको एफसीसीले १.६ लाई पर्याप्त मानेको छ । त्यसैले यदि तपाईंको फोनको एसएआर भ्यालु १.२ जति छ भने कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन ।
अहिले आएका फोनहरुको एसएआर प्राय ०.५ देखि ०.६ सम्म हुन्छ । ठूला ब्रान्डहरुको एसएआर न्यूनतम हुन्छ । यसका अतिरिक्त तपाईं आफ्नो फोनमा कुरा गर्दा एयरफोनको प्रयोग गरेर पनि यसको विकिरण एक्स्पोजरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुहून्छ ।
Previous एउटा फोनमा दुई फेसबुक एकाउन्ट कसरी खोल्ने ?
Next आइफोन तथा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा नम्बर ब्लक कसरी गर्ने ?